Tsvaga kuti ndedzipi shampoo dzakasimba kwazvo Bezzia
Iyo yakanakisa yakasimba shampoo
Susana Garcia | 04/04/2021 20:00 | Runako, Zvigadzirwa zverunako
La Pfungwa yemashampu akasimba achangosvika, asi ivo vava echinyakare kana zvasvika pakutarisira bvudzi redu. Ndicho chikonzero nei tichifanira kupa kwauri izvo zvatinofunga kuti ndiyo yakanakisa yakasimba shampoo pamusika, seti yezvizoro zvakakwana zvekutarisira bvudzi mukuita kwemazuva ese, nekuti shampoo ndiyo imwe yekiyi kune vhudzi rakanaka.
ari shampoo dzakasimba dzinouya mune fomati inonyanya kugarisana nharaunda, sezvo zvisingawanzove nemudziyo wepurasitiki, asi zvakare, kuva akasimba, mashoma makemikari anoshandiswa kugadzira iwo maratidziro uye mazhinji acho ari ecological, ayo akakwana kumvura, isina kusvibiswa kudaro. Saka isu tinofunga kuti ndiyo nguva yekuenderera kumberi nezvizoro zvikukutu.
1 Ngirozi Bvudzi naRush
2 Shampoo yakasimba yaMaria zvigadzirwa
3 Dr Muti shambuu maviri mune rimwe
4 Valquer yakaoma bvudzi shampoo
Ngirozi Bvudzi naRush
Iyi ndeimwe yemafemu anga akamira zvakanyanya nezvizoro zvikukutu, nekuti haina chete shampoos, asiwo ma conditioner, maoiri nemhando dzese dzezvinhu. Shampoos yakasimba yaLush ndeimwe yezvakanakisa zvinhu izvo zvinogona kutengwa pawebhusaiti yavo uye pane zvakawanda zvakasiyana. Angel Bvudzi shambuu ndeimwe yevanotengesa zvakanyanya, kunyanya nekuti iri nyoro uye inokodzera mhando dzese dzebvudzi. Pakati pezvikamu zvaro ine Ylang ylang yekutaurisa bvudzi uye kuitarisira. Aquafaba inowedzera simba uye kupenya, nepo kumuka kwemvura uye muroyi hazel zvichibatsira kutarisira ganda rakanyanyisa. Soy lecithin inobatsira kutora kwezvimwe zvinoshandiswa. Chinhu chakanaka ndechekuti tinogona kuona zvese zvinosanganiswa uye izvo chimwe nechimwe chazvo chinopa kune bvudzi redu, izvo zvinotibatsira kusarudza zvirinani.
Shampoo yakasimba yaMaria zvigadzirwa
Este yakasimba shampoo yakasikwa, vegan uye yakagadzirwa nemaoko. Iro bvudzi rakagadzirwa nevhudzi rine mafuta, nekuti nemidziyo yaro inoedza kugadzirisa dambudziko re sebum secretion munzvimbo yeganda, rinova iro dambudziko hombe rebvudzi rine mafuta. Iyo jojoba oiri iyo irimo inopa hydration pasina ine greasy kunzwa. Muto wendimu ndiyo inobatsira nesimba rayo rinogumbura kugadzirisa kugadzirwa kwemafuta. Iro jena kaolin ivhu rinobatsira kuchenesa ganda rekusachena nenzira yakapfava, pasina kutyora pH yayo. Hibiscus kubvisa uye rosemary mafuta anobatsira kuchengetedza bvudzi rakasimba uye riine hutano kubva pamidzi. Pasina kupokana isarudzo yakanaka yezvakagadzirwa uye nekutarisira bvudzi rine mafuta.
Dr Muti shambuu maviri mune rimwe
Kana iwe usina nguva yakawanda yemitambo yako yebvudzi kana uine usimbe, unogona zvakare kutenga shambuu yakasimba iyo mbiri mune imwe saDr Tree's. mabvazuva coconut kunhuhwirira shampoo yakakwana kune hanya uye inovaka bvudzi. Iine argan oiri, iyo yatinoziva inozivikanwa segoridhe remvura kune simba rayo rekudiridza nekukudza. Uye zvakare, ine vhitamini A uye E yekumutsiridza uye kutarisira iyo bvudzi fiber. Iyo zvakare ine cocoa batare base inotarisira ganda remusoro. Chinhu chakanakisa pamusoro peiyi shampoo ndechekuti inonatsa uye hydrate saka iwe unofanirwa kudzivirira kushandisa iyo inogadzirisa.
Valquer yakaoma bvudzi shampoo
Ese mafemu aya ane akati wandei eshampoo, kunyange isu tichingotaura nezve imwe chete. Semuenzaniso, iyi kubva kuValquer ndeyebvudzi rakaoma, kunyange paine mamwe marudzi ebvudzi. mabvazuva yakaoma bvudzi shampoo inoratidzira yakakosha kokonati mafuta kuidiridza. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti haisi shampoo ine zvakasikwa zvigadzirwa asi zvakare zvakanaka chaizvo kana usiri kutsvaga chimwe chinhu vegan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Iyo yakanakisa yakasimba shampoo